Global Voices teny Malagasy » ‘Mama Afrika’ ao Meksika Mampiantrano Mpifindramonina Avy Nanao Dia Lavitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2017 10:22 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Arimalala
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka
Concepción González Ramírez, fantatra ihany koa hoe “Mama Afrika”, mitantana trano kely fandraisambahiny ao Tapachula, tanàna kely ao Meksika, any atsimon'ny fanjakan'i Chiapas, eo am-pitan'ny sisintanin'i Goatemala. Sary : Amy Bracken.
Ity tantara avy amin'i Amy Bracken  ity dia nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 19 aprily 2017. Averina avoaka eto indray toy ny fifanarahana fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Ho an'ny mpifindramonina, na mandeha any Eoropa na Amerika Latina, misy toerana sasany lasa fantatra eny an-dàlana noho ny fandraisany olona.
Nitsidika toerana iray toy izany aho tany amin'ny tanàna Meksikana any Tapachula, akaikin'ny sisintany manamorona an'i Goatemala. Trano fandraisambahiny tena tsotra any akaikin'ny afovoan-tanàna izany. Vehivavy kelikely, Meksikana 59 taona manao solomaso mavokely ary manao kavina volamena no mpitantana azy. Concepción González Ramírez no anarany, teraka sy lehibe teto Tapachula izy, fa ny ahafantaran'ny maro azy dia Mama Africa. Antsoina toy izany izy satria ilay trano fandraisambahiny — ny tena marina dia izy mihitsy — no lasa fivantanan'ireo Afrikana, sy ny Haitiana, izay mandalo ao.
Tsy tena hoe mahafatifaty ilay trano fandraisambahiny. Amin'ny sarany $2.50 isaky ny alina, mipetraka aminà efitrano tsotra misy rindrina efa miempaka sy tsy mitemitra ary misy fandriana vy ireo mpivahiny. Eo amin'ny fandraisana, misy boloky ao anaty tranom-borona. Tsy misy famantarana ho an'ilay trano fandraisambahiny, fa ireo Afrikana sy ny Haitiana mpifindra monina an-jatony dia nahita ny làlana eto.
Indraindray, hoy i Ramírez, tonga miaraka aminà fiara ‘minibus’ feno himpoka ny olona avy ery an-tampon'ny làlana, ary “manomboka miantsoantso, ‘Mama Afrika! Aiza i Mama Afrika?!'”
Somary milamindamina izao, fa tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, nanana mpivahiny 200 tamin'ny fotoana iray i Ramirez. 24 monja ny efitrano ao, noho izany nisy olona sasany natory tao anaty trano baoritra tany ivelany. Tsy te handroaka na iza na iza izy (Mama Afrika)
Manampy amin'ny fitondrana ireo mpivahiny marary any amin'ny hopitaly koa izy, mividy ny fanafody izay tsy zakan'ny fahefa-mividin'izy ireo, ary manosotra menaka amin'ny tongotry ny mpivahiny izay reraka.
Tychique Sebastiao, avy any Angola, tonga vao haingana. Nanontany azy aho raha toa anaram-bosotra mendrika an'i Ramírez ny Mama Afrika.
Ny fianakaviana Sebastiao (miaraka amin'ny zanak'izy ireo vavy, Merrui, mihanihany amin'ilay volombava yaorta) mitsangana miaraka amin'i Concepción González Ramírez, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Mama Afrika. Avy any Angola nandalo tany Brezila ny fianakaviana Sebastiao, ary manantena ho tonga any Boston. Sary: Amy Bracken.
“Eny, eny”, hoy izy, sady nihomehy. “Tsapako fa tena toy izany tokoa izy, satria ny vehivavy Afrikana dia tena vehivavy tsara fanahy. Be fitiavana. Manana ilay fitiavan-dreny…. Tena milamina izahay eto.’
Anabaviny manantena ho tonga any Boston mba ho tafaray amin'ny vadiny, arahan'ny zanany telo, no mandalo ao miaraka amin'i Sebastiao.
Efa niaina tany Brezila izy ireo, fa ho an'ny Afrikana sasany, ny làlana mahazatra hahatongavana any Etazonia dia mandeha fiaramanidina mankany Amerika Atsimo aloha ary avy eo vao mianavaratra.
Nandre ny momba an'i Mama Afrika tamin'ireo mpiray dia taminy izy ireo (ny fianakaviana Sebastiao). “Mama Afrika dia anarana fantatra eran'ny làlana,” hoy Felix Michelet, mpivahiny ato avy any Haiti.
Nolazainy fa matetika miara-dàlana ny Haitiana sy Afrikana, ary ny Afrikana izay lasa lavidavitra kokoa dia nandefa teny momba an'i Ramírez avy amin'ny Whatsapp.
Tahaka ny Haitiana maro, niaina tany Brezila i Michelet, niasa tamin'ny sehatry ny fanorenana nialoha ny fiadiana ny Lalao Olaimpika sy Amboara Eran-tany. Taorian'ny namparefo ny toekarena Breziliana, nanomboka nirako-dàlana handeha any Etazonia izy. Nipetraka tao amin'i Mama Afrika nandritra ny volana maro izy, nivarotra karatra SIM mbba hanangona vola misimisy ho an'ny fiara fitateram-bahoaka ho any Tijuana.
Manontany aho raha mbola hifandray amin'i Ramirez izy.
“Mamanay i Mama Afrika, tsy havelanay handeha izy”, hoy izy sady nihomehy. “Hifandray foana izahay”.
Lazain'i Ramírez fa matetika mandefa hafatra ho azy ireo mpivahiny taloha, miarahaba na mitantara ny fivoaran'ny dian'izy ireo. Lazainy fa ny finoany maha-Kristiana azy no manentana ny asany. Tsy mahalala zavatra firy momba an'i Afrika izy, fa nianatra tamin'ny mpivahiny ny fahandroana akoho amin'ny fomba Ganeana izy.
Mety hoe malaza manodidina eto i Ramírez, nefa tsy izy irery no toeram-pivantanan'ireo mpifindra monina any Tapachulla. Any amin'ny lafiny iray hafa amin'ny tanàna, misy làlantany iray mitondra ho any amin'ny tranon'i Jesús Valenzuela. Tamin'ity ririnina ity, nanomana toerana ho an'ireo mpivahiny tao amin'ilay tranokeliny i Valenzuela sy ny fianakaviany. Polisy tao an-tanàna izy ary mahatsapa fa lany vola be tamin'ny tapakilan'ny fiara fitateram-bahoaka ireo Afrikana mpifindramonina. Nanomboka nanampy azy ireo hahazo fifanarahana ara-drariny izy, ary nampanofa ny tranony tamin'izy ireo amin'ny sarany iray dolara ny alina iray.
Ankehitriny, amin'ny olona maherin'ny 25, ny Haitiana no betsaka mipetraka eto. Misy matory amin'ny tsihy eo amin'ny tany, fa misy jiro, fanasana lamba, ary toerana fahandroana sakafo any ivelany.
Milaza i Valenzuela fa fantany izay manjò ny vahiny mandalo ao aminy.
“Efa tany Etazonia aho”, hoy izy. “Efa niainako izay iainan'izy ireo. Nandalo tany efitra aho, ary nijaly izahay. Misy toerana izay misy olona manampy, misy koa anefa toerana izay tsy manampy ny olona, izany no antony itiavako manohana sy manampy azy ireo.”
Rehefa afaka ny telo taona tany Etazonia, voaroaka i Valenzuela taorian'ny bemidina tao amin'ny toeram-piasana iray.
Ny ankamaroan'ny mpifindramonina avy any Tapachula dia avy any Amerika Afovoany, ary manokatra ny varavarany ho azy ireo koa ny sasany amin'ireo mponina ao an-toerana.
Milaza amiko i José Antonio Cordova Meléndez fa nandositra ireo mpisoloky tany Honduras izy niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany telo — ary tsy manana drafitra. Tao Tapachula, nanontany momba ny trano hipetrahana izy, ary olona tsy fantatra iray — reny tokantena– no nampiatrano azy ireo. Nandeha ny volana ary mbola ao an-tranony ilay fianakaviana, miezaka mitady izay hifindran'izy ireo manaraka.
Niverina tao amin'ny trano fandraisambahinin'i Mama Afrika, feno indray ireo efitrano. Mijery am-pilaminana ny findainy eo amin'ny fandraisana ireo mpandeha. Misy fiara ‘minibus’ tonga eo anio ary hametraka vahiny 20 vaovao , ny ankamaroany avy any Somalia.
Hita hoe faly i Ramírez noho ny tranony feno, nefa malahelo koa izy ho an'ireo vao lasa. Toy ny renibe mirehareha izy manakorisa ny tahirin-tsariny nomerika.. Misy ny sarin'ny zanany miaraka amin'ny taovolo nataon'ny vahininy iray, misy sarin'ny zafikeliny, ary ny ankamaroany an'ireo mpivahiny, tanora sy antitra. Mihomehy amin'alahelo izy eny an-tsefatsefan'ny fampidirana fohy ataony.
“Ya se fueron”, hoy izy, namerimberina. “Efa lasa izy ireo”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/23/98700/
 nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-04-19/mexico-s-mama-africa-welcomes-migrants-long-journey